Andro ho an’ny sakafo : tsy ampy fotodrafitrasa ny fambolena … | NewsMada
Andro ho an’ny sakafo : tsy ampy fotodrafitrasa ny fambolena …
Anio ny fankalzana ny Andro eran-tany ho an’ny sakafo. Eto Madagasikara, any amin’ny kaominina Mahatsinjo, distrikan’i Maevatanàna, faritra Betsiboka, ny ankalazana izany, tantanan’ny FAO.
“Entanina ny rehetra hampiasa vola ho amin’ny fambolena sy ny fiompiana”. Io ny lohahevitra nosarihin’ny FAO amin’ity andro eran-tany ity, sady hafatra ho an’ireo mpifindra monina, hijery ny hoavy sy hanova ny fomba fiasa. “Tsy hisy intsony ny hanoanana”, izay ny tanjona napetraky ny FAO amin’ny taona 2030.
Eto Madagasikara manokana, nambaran’ny eo anivon’ny minisitera misahana ny Fambolena sy ny fiompiana ireo tetikasa samihafa ao amin’io sehatra iandraiketany io hiadiana amin’ny tsy fahampian-tsakafo. « Homen-danja manokana ny fambolena sy ny fiompiana, hamafisina izany amin’ny alalan’ny fampiasam-bola », hoy ny minisitra Rakotovao Rivo. Eo ny asa ataon’ny fanjakana manampy amin’ny fotodrafitrasa, toy ny tohodrano, fanajariana ireo lemaka samihafa, fanohanana teknika fa entanina manokana koa ireo mpandraharaha hampiasa vola ho fampitomboana ny vokatra eto an-toerana. Tsy mahasarika ny mpampiasa vola, hatramin’izao, ity sehatra ity.
«Misy ny miankina aminay fa miankiana amin’ny anjara asan’ny fanjakana koa anefa izany », araka ny fanamarihan’ny mpandraharaha iray. «Mbola lafo sady tsy azo antoka ny fampiasam-bola any amin’ny fambolena sy fiompiana, noho ny tsy fisian’ny lalana, ohatra, famatsiana herinaratra, ankoatra ny tsy fandriampahalemana », raha ny fanamarihan’io mpandraharaha io. Na izany aza, azo atomboka tsikelikely ny fidirana amin’ny fambolena sy fiompiana, tsy voatery hampiasana volabe antapitrisany maro avy hatrany izany, raha namaly izany indray ny fanjakana. Tokony hiara-hiainga izany ny fanjakana sy ny tsy miankina.
Betsaka ny dingana miandry hiadiana amin’ny tsy fahampian-tsakafo. Araka ny tatitra navoakan’ny Firenena mikambana (ONU), misy 46 % be izao ny Malagasy tsy ampy sakafo eto amin’ity tany midadasika sy mamokatra be ity, no mbola miampy ranomasina ny manodidina azy. Araka ny tatitry ny Firenena mikambana ihany, 450.000 ny Malagasy voadona mafy noho izay tsy fahampian-tsakafo izay. Tsy rariny!